Ngathi - Ningbo ACE OOMATSHINI Co., Ltd.
Oomatshini be-ACE ngokudibanisa ngokupheleleyo amandla kunye ne-finesse ukukuzisela ogqwesileyo kumatshini wekhonkrithi kunye nokuxinana. Njengomvelisi ophambili waseTshayina wezixhobo zokwakha ezisindayo, sinokunika abathengi uluhlu olubanzi lwezixhobo ezinikezelweyo kubandakanya impompo yamanzi, umsiki we-rebar, i-rebar bender, isarha yekhonkrithi, kunye nomxube wekhonkrithi. Ikwakhona ukhetho olupheleleyo lwezixhobo zeekhonkrithi. Ukugqwesa kulwakhiwo olusisiseko kunye nolondolozo, iimveliso zethu zihlala zisetyenziswa kwiindawo zokusebenzela ezinjengeendlela, izindlu, iiplaza, oololiwe, kunye neenqwelo moya.
Izixhobo ze-ACE zivunyiwe yimigangatho yemizi-mveliso efana neEC kunye neCCC. Ukuqala kwi-2009, izixhobo zethu zemveliso ziphicothwe minyaka le ziingcali ezivela kwiqela le-TÜV SÜD. Ukusukela oko uthungelwano lwethu lokuhambisa phesheya lwasekwa ngo-2005, sikhusele iindawo zokuthumela ngaphandle kwimimandla kubandakanya iMelika, iAfrika, iMpuma Yurophu, uMzantsi mpuma weAsia, uMbindi Mpuma, njl.
Isatifikethi sethu esiPhambili
Inkampani yethu yabandakanywa ngo-1995 njengeZhenxing Construction Machinery Factory. Sizinze ngaphakathi kwiSithili saseYinzhou kwisiXeko saseNingbo, indawo yaseTshayina yokulungiselela iinaliti zesidlidliza-ukusebenza kwethu kuqalile ngokukhethekileyo kweli candelo. Phantse ama-2 eminyaka yamava orhwebo lwangaphandle asivumele ukuba sivele njengomvelisi obalaseleyo kwishishini lasekhaya. Ipropathi yethu yenkampani yandisa i-8,000m2 ngelixa umgangatho womgangatho odibeneyo wezixhobo zethu ufikelela kwi-23,000m2. Sondela kufutshane zombini i-Ningbo Port kunye neLishe International Airport zisinika ulungiselelo olululo.
Sine-capital capital ebhalisiweyo ye-1.3 yezigidi ze-RMB kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-120 kubandakanya iinjineli zemveliso ezi-3, iisuphavayiza ezi-3 zemveliso, abaphathi bokugcina izinto aba-4, abacebisi aba-5 be-QA, abasebenzi abayi-8, kunye nabasebenzi abanezakhono abangama-95. Ngo-2012, sarekhoda ingeniso yezigidi ezingama-38 zeRMB. Iziseko zophuhliso lwenkampani yethu yahlulwe yangamasebe aqulathe izinto ezizodwa ezinje ngophuhliso, imveliso, indibano, isampulu, ucoceko, ukuqinisekiswa komgangatho, kunye nabasebenzi. Ulawulo olwenzelwe wena lusivumela ukuba sisebenzise indawo yokusebenza kwaye siphucule inkqubo yokuhamba ngelixa silawula ngokungqongqo inkqubo yolawulo lomgangatho.